Home Wararka Somaliya oo Dib ugu soo Noqotay Caalamka, 5 Sano Kadib
Somaliya oo Dib ugu soo Noqotay Caalamka, 5 Sano Kadib
Somaliya ayaa go’doon siyaasadeed ku jirtay muddadii uu hogaaminayey MW hore Maxamed Cabdullahi Farmajo. Waxayna markii ugu horreysay ay ka qeybgaleen ciidankeena dhoollatus milateri muddo 5 sano ah, waana guuul weyn oo dalka u soo hoyatay mar kale.
Dalka Sucuudiga ayaa waxaa ku soo gabagaboobay dhoolatus milateri oo ay la sameysay dalalka Badda Cas, waxayna taas sare u qaaday diyaargarowga dagaalka waddama ku jeeda Badda Casa.
Cutubyo ka tirsan ciidanka difaaca ee waddamada kulaala Badda Cas ayaa soo gabagabeeyay dhoolatus milateri oo uu hogaminayey dalka Sacuudiga, kaas oo ay ka qeybgaleen waddamada, Djibouti, Masar, Jordan, Somalia, Sudan iyo Yemen, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Sacuudiga Sabtidii.
Magaca ‘Red Wave-5’ iyo dhaqdhaqaaqa maraakiibta galbeedka ee Sucuudiga oo uu hawshooda hogaaminayey Ciidanka Bada ee Boqortooyada Sucuudiga oo ay weheliyaan dalalka liiska ku jira ee xeebaha Badda Cas ku teedsan ayaa si guul leh u soo dhamaaday.
Waxaa dhoolatuska hor kacayey Taliyaha Ciidanka Galbeedka ee Sucuudiga Rear Admiral Yahya bin Mohammed Asiri.
Hawlgalka, oo soo gabagabeeyay Khamiista, “wuxuu kor u qaaday u diyaar-garowga dagaalka ee waddamadan” wuxuuna gacan ka geystay “kor u qaadista awoodaha amniga si loo ilaaliyo badaha iyo marinnada biyaha gobolka, kuwa caalamiga ah iyo dammaanad-qaadista marin-badeedka badda cas,” waa sida ay ka soo xigatay Admiral Asiri Wakaaladda wararka ee Sacudiga SPA.
Somaliya oo go’doon siyaasadeed ku jirtay 5tii sano ee uu Farmajo ayaa hogaaminayey ayaa hadda waxay dib ugu soo noqoneysaa dhamaan maqaamkii ay ku lahayd waddama caalamka gaar kuwa geeska Afrika oo uu Farmajo ku soo koobay xirirkeenna Erateriya oo iyadaba dunida inteeeda badan iyo Itoobiya si uu u ilaaliyo “ qabka Somaliya”? Waxaa dhoollatuska ka mqanaa Erateriya oo aan la maqnaan lahayn haddii uu Farmajo joogi lahaa si aan ula ilaalinno qabka uu Afawerki weli ilaalinayo oo uu kaga maqaa dhoollatuska.
Doorashadii MW Xasan sheekh kadib, Waxaa durbaba dalka ku soo fool leh Madax caalaamka ka tirsan oo ka qeyb galaya caleemasaarka Madaxweynaha dhawaan la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo intaa ay iska soo daba dhacayaan dhambaallada Tahniyada ah, waana ka dhabeynta hal hayskii uu Doorashada ku galay ee ahaa “ Somali Heshiis ah Dunidana Heshiis la ah”
Previous articleHaweenay maalmo la weysanaa oo Meydkeeda laga helay Baydhabo
Next articleQabkii uu sheegi jiaray Siyaad Barre & Kan Farmanjo waa isku mid.
(Deg Deg) Qarax weyn oo hadda Muqdisho gilgilay
Xildhiaano halis ugu jira in ay al-shabaab weeraraan